Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray shir weynaha Dib- heshiisiinta Galmudug – Puntland Post
Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray shir weynaha Dib- heshiisiinta Galmudug
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo xiray Shirka Dib-u-heshiisiinta Galmudug ayaa sheegay in loo gudbay wajigii labaad ee qorshaha dhammaystirka dhismaha maamul mideysan oo hana qaada, kana tarjuma hiigsiga iyo himilada shacabka Degaannada Galmudug.
Madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalka mideysan ee heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ee uu sheegay in uu horseeday qabsoomidda Shirweynaha Dib-u-heshiisiinta Galmudug , isaga oo ku bogaadiyay, waxgaradka iyo haldoorka degaannada Galmudug bisaylka ay muujiyeen iyo in ay wadajir ugu istaageen ka mira-dhalinta fursaddan taariikhiga ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa u ballanqaaday shacabka Galmudug in dowladda Federaalka Soomaaliya ay la garab taagan tahay taageero joogto ah iyo sidii ay u xaqiijin lahaayeen himiladooda iyo horumarka ay hiigsanayaan.
Ugu danbayntii mudane Farmaajo ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf), madaxa Xukuumadda Galmudug Sh. Maxamed Shaakir Cali iyo guddoomiyaha guddiga Qabanqaabada Shirweynaha Dib-u-heshiisiinta Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow oo dhammaantood kaalin mug leh ka qaatay qabsoomidda iyo guul ka gaaridda Shirweynahan.